Israel oo wada olole ay ku tarxiilayso muhaajiriin u dhashay koonfurta Sudan – SBC
Israel oo wada olole ay ku tarxiilayso muhaajiriin u dhashay koonfurta Sudan
Posted by Webmaster on Juun 13, 2012 Comments
Tel Aviv:- MaamulkaIsrael ayaa gacanta ku dhigay 55 muhaajiriin si sharci dara ah ku soo galayIsrael kuwaasi oo badankoodu ay yihiin kuwa u dhashay ka soo jeedo koonfurta Sudan.
Wasiirka arrimaha gudahaIsraelninka lagu magcaabo iili Yashaay ayaa xaqiijiyey in in kabadan 100 muhaajiriin si sharci dara ah ku soo galay Israelloo tarxiili doono koonfurta Sudan toddobaadka soo socda.
Wasiirka oo la hadlayey Radio Israel ayaa sheegay in Israel ay bilowday maanta olole ay ku tarxiilayso kuwa dhuumaaleysiga ku soo galay Israel oo ka yimid koonfurta Sudan.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in la filayo inIsraelay ka ambabaxdo diyaarad ay saaran yihiin inkabadan 100 muhaajiriin oo ka yimid koonfurta sudan. wasiirku waxa uu tilmaamay in dadka dib loo celinayo la siin doono 500 oo dollar , Yashaay ayaa ku nuuxnuuxsaday in ololahan loola jeedo in la ilaaliyo amniga iyo jiritaankaIsrael.
Israelayaa qabqabatay 55 muhaajiriin oo 45 kamid ah ay yihiin koonfurtaSudan, halka kuwa kalana ay ka soo jeedaan dalalkaNigeria,GhanaiyoIvory Coast.
IdaacaddaIsraelayaa sheegtay in ololaha qabqabashada ay hordhac u tahay inIsraellaga tarxiilo inkabadan 1500 oo ka soo jeeda koonfurtaSudan.
Xuduuda u dhexeysa dalalka Masar iyo Israa’iil oo ah mid dherekeedu uu gaarayo 250 km, ayaa la’aaminsan yahay in muhaajiriinta ay si weyn uga faa’ideystaan iyagoo ay la socdaan reer baadiye ku dhaqan goobahaas iyo kooxo kale oo ku takhasusay tahrribinta mukhaadaraadka iyo tahriibinta dadka sida sharci darada ah kugala dalalka deriska la ah dalka Masar.